တစ်ချိန်က 90s' kids မိန်းကလေးတိုင်း ခွက်ရ်ှခဲ့ကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး မင်းသား ဘေယောင်ဂျွန်း - For her Myanmar
တစ်ချိန်က 90s’ kids မိန်းကလေးတိုင်း ခွက်ရ်ှခဲ့ကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး မင်းသား ဘေယောင်ဂျွန်း
Biography, Celebrity News
“မြင့်မြတ်နှလုံးသား ပိုင်ရှင်” (The Legend) ထဲက ဆံပင်အရှည်လေးနဲ့ ပုံကို ကြွေဆင်းခဲ့ရသူပါ..
ဟေမာန်ဆောင်းရဲ့ ချစ်သံစဉ်၊ ဟိုတယ်ချစ်သူ စတဲ့ တစ်ချိန်က အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကိုရီးယား ဒရာမာတွေကို သတိရကြသေးရဲ့လား ယောင်းတို့ရေ? မမေ့သင့်ပါဘူးနော်…90s’ kids တို့ မှန်ရင်ပေါ့
အက်ဒ်မင်ကတော့ လုံးဝမမေ့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီဇာတ်လမ်းတွေထဲက မင်းသား ဘေယောင်ဂျွန်းက အက်ဒ်မင့် ငယ်ချစ်ဦး crushဖြစ်ခဲ့တာကိုး.. <3 <3
တခြားမင်းသားတွေနဲ့ မတူဘဲ သူ့ဆီမှာ handsomeဖြစ်တာရော cute ဖြစ်တာပါ နှစ်ခုလုံးတွေ့ရတဲ့၊ ဆံရှည်လေးနဲ့ဆို မိန်းမချောလည်း ချောတဲ့ အိုပါး (အမှန်တော့ အာဂျူးရှိပါ 😀 ) ရဲ့ အကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့…
၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် ၂၉မှာ မွေးဖွားခဲ့တာမို့ ခုဆို သူက အသက်၄၆နှစ်တောင် ရှိပါပြီ ။ အိုပါးရဲ့ နက္ခတ်က Virgo ဖြစ်ပြီး အိုသွေးပါတဲ့။ သူ ငယ်ငယ်တုန်းက တိုက်ကွမ်ဒိုကို ရူးသွပ်ခဲ့ပြီး တစ်ကြိမ်ကဆို အကန်ခံလိုက်ရလို့ မျက်လုံးမှာ ဒဏ်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရဖူးပါတယ်။ သူဟာ ရေကူးရတာ၊ နှင်းလျှောစီးရတာ၊ ဘိုးလင်းပစ်ရတာလည်း ကြိုက်သလို ငါးမျှားရတာလည်း ကြိုက်သူပါ။
၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ ဘေယောင်ဂျွန်းဟာ Sungkyunkwan တက္ကသိုလ်မှာ ရုပ်ရှင်၊ TV နဲ့ ဘက်စုံမီဒီယာ ကို တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ တက္ကသိုလ်ကနေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းကို ကောင်းကောင်းအာရုံစိုက်ပြီးပဲ လုပ်ချင်လို့ပါတဲ့။
ဘေယောင်ဂျွန်းက ၁၉၉၄ခုနှစ်မှာ အနုပညာအလုပ်တွေ စလုပ်ခဲ့တာမို့ အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ ကမ္ဘာက သိသွားတဲ့အထိ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်သွားစေတဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ Winter Sonata ( ဟေမာန်ဆောင်းရဲ့ ချစ်သံစဉ်) ပါပဲ။
Winter Sonataထဲက သူတို့
အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ နိုင်ငံတကာကို ရိုက်ခတ်သွားတဲ့ ဒုတိယ ကိုရီးယားလှိုင်းလုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသလို ဘေယောင်ဂျွန်းတစ်ယောက် ဒီဇာတ်ကားအတွက် ဂျပန်သွားတဲ့အခါ ဂျပန်လေဆိပ်တစ်ခုလုံးဟာ သူ့ပရိသတ်တွေနဲ့ ပြည့်လျှံသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
အကယ်ဒမီဆုပေါင်းများစွာလည်း ရရှိခဲ့ပြီး မျိုးဆက်တစ်ဆက်ရဲ့ အတော်ဆုံးအနုပညာရှင် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတဲ့ ဘေယောင်ဂျွန်းဟာ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကနေ အနားယူခဲ့ပါတယ်။ (ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ကို သိပ်မတွေ့ရတော့တာကိုး )
Related Article >>> မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အံ့မခန်းနုပျိုနေတဲ့ ကိုရီးယားဆယ်လီများ
ဘေယောင်ဂျွန်းသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကတော့ ၁၉၉၄မှာ Salut D’Amour, ၁၉၉၅မှာ Our Sunny Days of Youth နဲ့ Sea Breeze, ၁၉၉၆ မှာ Papa, Colour “Blue” နဲ့ First love, ၁၉၉၇ မှာ The Angel within, ၁၉၉၈ မှာ The Barefooted Youth, ၁၉၉၉ မှာ Did we really, ၂၀၀၁ မှာ Hotelier, ၂၀၀၂မှာ Winter Sonata, ၂၀၀၇မှာ The legend တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ( အိုပါးကို သတိရရင် ရှာဖွေပြီး ပြန်ကြည့်ပါလေ 😛 )
ဘေယောင်ဂျွန်းဟာ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သလို အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေယောင်ဂျွန်းဟာ သူ့ရဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ငြီးငွေ့လာတာမို့ စာရေးဆရာ လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ The Image: Volume 1 ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
ဒီပထမဆုံးစာအုပ်ဟာ အုပ်ရေ(၁)သန်းကျော် ရောင်းချရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၀၅မှာ 100 days of Bae Yong Joon၊ ၂၀၀၇မှာ BYJ family book၊ ၂၀၀၉မှာ Journey in search of Korea’s beauty နဲ့ ၂၀၁၂မှာတော့ Visit to Tokyoဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထိုးထွင်းဉာဏ်ကောင်းတဲ့ ဘေယောင်ဂျွန်းဟာ ဘယ်အလုပ်မဆို အောင်မြင်အောင် လုပ်တတ်သူလို့ ဆိုရမှာပါ။ သူဟာ Key East အမည်ရှိတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သလို စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆို သူ့ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို ဂျပန်အထိ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘေယောင်ဂျွန်းရဲ့ လက်ရှိ အသားတင် ကြွယ်ဝပိုင်ဆိုင်မှုက ဒေါ်လာ၁၃၅သန်းလောက် ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Instagram account ကတော့ yongjoon_bae ပါ။
တစ်သက်လုံး လူပျိုကြီး လုပ်တော့မှာလားလို့ အထင်ခံနေရတဲ့ ဘေယောင်ဂျွန်းဟာ အသက် ၄၃နှစ်မှာမှ သူ့ထက် ၁၄နှစ်ငယ်တဲ့ မင်းသမီးလေး ပက်ဆူဂျင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့လို့ အစောပိုင်းကာလမှာ ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ခုတော့လည်း သားလေးတစ်ယောက် သမီးလေးတစ်ယောက်ရပြီး ပျော်စရာဘဝလေး ဖြစ်နေပါပြီ။
သတင်းတွေအရဆို အိုပါးဟာ သူ့ ဇနီးချောလေးကို သိပ်ချစ်ပါသတဲ့။
ဒါ သူတို့ အိမ်ထောင်သက် ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်မှာ Instagramပေါ် တင်ထားတဲ့ ပုံလေး
ကဲကဲ…. အိုပါးနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့ ရေစက်ကို အိုပါးရဲ့ သားနဲ့မှ ပြန်ဆက်စို့လား ယောင်းတို့ရေ
Reference links: Asianwiki.com channel-korea.com
ဟမောနျဆောငျးရဲ့ ခဈြသံစဉျ၊ ဟိုတယျခဈြသူ စတဲ့ တဈခြိနျက အရမျးနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ကိုရီးယား ဒရာမာတှကေို သတိရကွသေးရဲ့လား ယောငျးတို့ရေ? မမသေ့ငျ့ပါဘူးနျော…90s’ kids တို့ မှနျရငျပေါ့
အကျဒျမငျကတော့ လုံးဝမမဘေူ့း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီဇာတျလမျးတှထေဲက မငျးသား ဘယေောငျဂြှနျးက အကျဒျမငျ့ ငယျခဈြဦး crushဖွဈခဲ့တာကိုး.. <3 <3
တခွားမငျးသားတှနေဲ့ မတူဘဲ သူ့ဆီမှာ handsomeဖွဈတာရော cute ဖွဈတာပါ နှဈခုလုံးတှရေ့တဲ့၊ ဆံရှညျလေးနဲ့ဆို မိနျးမခြောလညျး ခြောတဲ့ အိုပါး (အမှနျတော့ အာဂြူးရှိပါ 😀 ) ရဲ့ အကွောငျးကို ပွောရမယျဆိုရငျတော့…
၁၉၇၂ ခုနှဈ၊ ဩဂုတျ ၂၉မှာ မှေးဖှားခဲ့တာမို့ ခုဆို သူက အသကျ၄၆နှဈတောငျ ရှိပါပွီ ။ အိုပါးရဲ့ နက်ခတျက Virgo ဖွဈပွီး အိုသှေးပါတဲ့။ သူ ငယျငယျတုနျးက တိုကျကှမျဒိုကို ရူးသှပျခဲ့ပွီး တဈကွိမျကဆို အကနျခံလိုကျရလို့ မကျြလုံးမှာ ဒဏျရာ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ရဖူးပါတယျ။ သူဟာ ရကေူးရတာ၊ နှငျးလြှောစီးရတာ၊ ဘိုးလငျးပဈရတာလညျး ကွိုကျသလို ငါးမြှားရတာလညျး ကွိုကျသူပါ။
၂၀၀၀ခုနှဈမှာ ဘယေောငျဂြှနျးဟာ Sungkyunkwan တက်ကသိုလျမှာ ရုပျရှငျ၊ TV နဲ့ ဘကျစုံမီဒီယာ ကို တကျရောကျသငျယူခဲ့ပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ တက်ကသိုလျကနေ ထှကျခဲ့ပါတယျ။ အကွောငျးရငျးကတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာလုပျငနျးကို ကောငျးကောငျးအာရုံစိုကျပွီးပဲ လုပျခငျြလို့ပါတဲ့။
ဘယေောငျဂြှနျးက ၁၉၉၄ခုနှဈမှာ အနုပညာအလုပျတှေ စလုပျခဲ့တာမို့ အထိုကျအလြောကျအောငျမွငျခဲ့ပမေဲ့ ကမ်ဘာက သိသှားတဲ့အထိ အကွီးအကယျြ အောငျမွငျသှားစတေဲ့ ဇာတျလမျးကတော့ Winter Sonata ( ဟမောနျဆောငျးရဲ့ ခဈြသံစဉျ) ပါပဲ။
အရမျးနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇာတျလမျးဟာ နိုငျငံတကာကို ရိုကျခတျသှားတဲ့ ဒုတိယ ကိုရီးယားလှိုငျးလုံးအဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရသလို ဘယေောငျဂြှနျးတဈယောကျ ဒီဇာတျကားအတှကျ ဂပြနျသှားတဲ့အခါ ဂပြနျလဆေိပျတဈခုလုံးဟာ သူ့ပရိသတျတှနေဲ့ ပွညျ့လြှံသှားခဲ့ပါသေးတယျ။
အကယျဒမီဆုပေါငျးမြားစှာလညျး ရရှိခဲ့ပွီး မြိုးဆကျတဈဆကျရဲ့ အတျောဆုံးအနုပညာရှငျ အဖွဈ အသိအမှတျပွုခံခဲ့ရတဲ့ ဘယေောငျဂြှနျးဟာ ၂၀၀၇ခုနှဈမှာ သရုပျဆောငျအလုပျကနေ အနားယူခဲ့ပါတယျ။ (ဒါကွောငျ့ နောကျပိုငျးမှာ သူ့ကို သိပျမတှရေ့တော့တာကိုး)
Related Article >>> မယုံကွညျနိုငျလောကျအောငျ အံ့မခနျးနုပြိုနတေဲ့ ကိုရီးယားဆယျလီမြား
ဘယေောငျဂြှနျးသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးကောငျးတှကေတော့ ၁၉၉၄မှာ Salut D’Amour, ၁၉၉၅မှာ Our Sunny Days of Youth နဲ့ Sea Breeze, ၁၉၉၆ မှာ Papa, Colour “Blue” နဲ့ First love, ၁၉၉၇ မှာ The Angel within, ၁၉၉၈ မှာ The Barefooted Youth, ၁၉၉၉ မှာ Did we really, ၂၀၀၁ မှာ Hotelier, ၂၀၀၂မှာ Winter Sonata, ၂၀၀၇မှာ The legend တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ ( အိုပါးကို သတိရရငျ ရှာဖှပွေီး ပွနျကွညျ့ပါလေ 😛 )
ဘယေောငျဂြှနျးဟာ တောငျကိုရီးယားရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသားတဈယောကျဖွဈသလို အောငျမွငျတဲ့ စာရေးဆရာနဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဘယေောငျဂြှနျးဟာ သူ့ရဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို ငွီးငှလေ့ာတာမို့ စာရေးဆရာ လုပျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၀၄ခုနှဈမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး စာအုပျဖွဈတဲ့ The Image: Volume 1 ကို ထုတျဝခေဲ့ပါတယျ။
ဒီပထမဆုံးစာအုပျဟာ အုပျရေ(၁)သနျးကြျော ရောငျးခရြတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ၂၀၀၅မှာ 100 days of Bae Yong Joon၊ ၂၀၀၇မှာ BYJ family book၊ ၂၀၀၉မှာ Journey in search of Korea’s beauty နဲ့ ၂၀၁၂မှာတော့ Visit to Tokyoဆိုတဲ့ စာအုပျတှကေို ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ထိုးထှငျးဉာဏျကောငျးတဲ့ ဘယေောငျဂြှနျးဟာ ဘယျအလုပျမဆို အောငျမွငျအောငျ လုပျတတျသူလို့ ဆိုရမှာပါ။ သူဟာ Key East အမညျရှိတဲ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုအဂေငျြစီရဲ့ ဥက်ကဌဖွဈသလို စားသောကျဆိုငျလုပျငနျး ပိုငျရှငျလညျး ဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> အောငျမွငျလှနျးတာကွောငျ့ တဈခြိနျက မွောကျကိုရီးယားတှပွေနျပေးဆှဲတာ ခံခဲ့ရတဲ့ မငျးသမီးကွီး ခြှဲအှနျဟီး
ခုဆို သူ့ရဲ့ စားသောကျဆိုငျကို ဂပြနျအထိ တိုးခြဲ့ ဖှငျ့လှဈထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဘယေောငျဂြှနျးရဲ့ လကျရှိ အသားတငျ ကွှယျဝပိုငျဆိုငျမှုက ဒျေါလာ၁၃၅သနျးလောကျ ရှိပါတယျ။ သူ့ရဲ့ Instagram account ကတော့ yongjoon_bae ပါ။
တဈသကျလုံး လူပြိုကွီး လုပျတော့မှာလားလို့ အထငျခံနရေတဲ့ ဘယေောငျဂြှနျးဟာ အသကျ ၄၃နှဈမှာမှ သူ့ထကျ ၁၄နှဈငယျတဲ့ မငျးသမီးလေး ပကျဆူဂငျြးနဲ့ အိမျထောငျပွုခဲ့လို့ အစောပိုငျးကာလမှာ ဝဖေနျခံခဲ့ရပါသေးတယျ။
ဒါပမေဲ့ ခုတော့လညျး သားလေးတဈယောကျ သမီးလေးတဈယောကျရပွီး ပြျောစရာဘဝလေး ဖွဈနပေါပွီ။
သတငျးတှအေရဆို အိုပါးဟာ သူ့ ဇနီးခြောလေးကို သိပျခဈြပါသတဲ့။
ဒါ သူတို့ အိမျထောငျသကျ ၂ နှဈပွညျ့ အထိမျးအမှတျမှာ Instagramပျေါ တငျထားတဲ့ ပုံလေး
ကဲကဲ…. အိုပါးနဲ့ ပွတျသှားတဲ့ ရစေကျကို အိုပါးရဲ့ သားနဲ့မှ ပွနျဆကျစို့လား ယောငျးတို့ရေ
Tags: actor, Bae Young Joon, celebrity, Crush, Korea, News, Winter Sonata
ချစ်သူတွေကြားမှာ ဝင်ရှုပ်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ
အက်ဒ်မင်အကြိုက်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Beauty Blogger (၅) ဦး
Aye Mon Kyaw December 19, 2018